Kodzero-dzevanhu, 09 Nyamavhuvhu 2019
Chishanu 9 Nyamavhuvhu 2019
Mapato Onyoresa Kukwikwidza Sarudzo yeMumiriri weZaka East
Mukuru wekufambiswa kwebasa muZimbabwe Election Commission mudunhu reMasvingo, VaZex Pudurai, vati kunyoreswa kwevachakwikwidza ava kwaitwa zvakanaka pasina zvanetsa.
African Diaspora Forum Yoronga Kukwirira Hurumende yeSouth Africa kuMatare
Sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Doctor Vusumuzi Sibanda, vanoti sangano ravo riri kukurudzirwa nevakasungwa ava kuti rivamirire mukushungurudzwa kwavakaitwa uye kutyorerwa kodzero dzavo.
Emmerson Mnangagwa Junior Anoti Haana Chikwereti kuCBZ
Mwanakomana wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa, Emmerson Mnangagwa Junior aramba mashoko ekuti akakwereta mari kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe akakundikana kudzosera mari yacho.
Amai Mupfumira Vanodzingwa Basa
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vamisa basa gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Prisca Mupfumira, vachivapomera mhosva yekuita zvinhu zvisingatarisirwe kunge zvichiitwa negurukota
Vakarwa Hondo Vokurudzira Kuti Vave neHumiriri muParamende
Vakarwa Hondo vanoti vanofanirwawo kuti vabvumidzwe kupinza munyika dzimotokari vasingabhadhare mitero, kuwaniswa nzvimbo dzekuvakira dzimba, uye kuti vana vavo vawaniswe mabasa, nezvimwe zvakawanda.
Vanhu Voramba Mari dzemaRTGS Vachida Madhora ekuAmerica
Hurongwa hwehurumende hwekuti vanhu vashandise dhora remunyika chete reRTGS dollar hwave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika sezvoi vemabizimisi vave kuti vave kuda mari dzekunze pane zvavari kutengesa kunyngwe vakawanda vari kutambiriswa mari dzemaRTGS.
Vamwe Vobvuma Vamwe Vachiramba Kuti Vane Chikwereti kuBhanga reCBZ
Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe, CBZ, rinonzi rinogona kunge rakarasikirwa nemamiriyoni emadhora nenyaya yekukweretesa vamwe vakuru munyaya dzezvematongerwo enyika avo vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo kubhanga.
Mapurisa muSouth Africa Anosunga Zvizvarwa zveKune Dzimwe Nyika
Mapurisa emuSouth Africa anonzi asunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimusi evabvakure ava muguta reJohannesburg.